Xiaomi Mpanampy trano - SmartMe
Dom » Arakaraka ny sokajy 'Mpanampy trano'
Ao amin'ity sokajy ity ianao dia hahita hevitra, torolàlana ary ny votoatiny rehetra mifandraika amin'ny teknolojia an-trano. Fantaro bebe kokoa momba ny fitaovana Xiaomi Aqara sy ny maro hafa, izay ahafahanao mankafy ny tombontsoa amin'ny fananana trano manan-tsaina izay mahitsy ny fifehezana ary ilaina, ambonin'izany rehetra izany.
Inona no atao hoe mpanampy an-trano
Tsotra, HA, na mpanampy an-trano dia rafitra an-trano tsy maranitra. Ahoana no ahafahantsika miresaka vahaolana maimaim-poana? Ity dia rindrambaiko open source, noho izany ny mpampiasa mahay rehetra dia afaka manao zavatra ho an'ny fampandrosoana. Ny mpanampy trano dia miasa amin'ny sehatra sy solosaina isan-karazany - eo an-toerana eo an-toerana, tsy mila rahona. Fitaovana an-jatony na an'arivony koa no mampiditra miaraka amin'ny HA, mba hahafahanao mamolavola ny rafi-trano mahay misy anao manokana amin'ny alàlan'ny fanamboarana ireo vokatra manana lenta, ohatra ny orinasa Xiaomi Xiaomi.
Ao amin'ireo mpitari-dalana anay dia manoro hevitra ny fomba hampiasana ny vahaolana amin'ny fomba mahomby sy amin'ny fomba mahomby sy izay tokony hatao ianao mba hampivoarana ny tanjaky ny filanao. Ny fampielezana fahalalana momba an'io lohahevitra io dia fananganana trano ho an'ny fampandrosoana ny hevitra an-trano mahay. Ny lafiny maro mifandraika amin'izany dia mbola tsy fantatra tsara ao Polonina.
Ny teknolojia Xiaomi
Xiaomi dia iray amin'ireo orinasa mankasitraka ny mpanampy an-trano miha mahazo laza. Ny Xiaomi Aqara dia fanombohana natolotry ny mpanamboatra sinoa iray ary mampiroborobo ny teknolojia finday hendry.
Amin'ny maha-rafitra rafitra iray anao, azonao atao ny manamboatra fitaovana isan-karazany, ao anatin'izany ny sensor (sensor), webcams, sombin-tsofina vita am-pandehanana, fametrahana jiro, fametrahana jiro, fanaraha-maso lavitra ary maro hafa.
Endri-javatra iray amin'ny rafitra ihany koa ny fahatsinjovana. Ny fanaraha-maso ny fitaovana Apple HomeKit miaraka amina switch Xiaomi dia azo atao. Ao anatin'ireo lahatsoratray dia mirakitra lohahevitra azo ampiharina maro isika, misy koa ny famerenana ny vahaolana tsirairay. Noho izany dia manoro hevitra ny famakiana am-pitandremana ianao ary hampirisika anao hifandray aminay mivantana raha manomboka mieritreritra ireo lafiny manaraka momba ny fananana mpanampy trano eo ambany fitarihan'ny atiny famakiana ianao.
Namorona ny sokajy natokana ho an'ny mpanampy an-trano, tsy afaka hamoy ny fandinihana sy ny fitsapana isika. Ireo karazana fitaovana ireo dia mahatonga anao hianatra momba ny fanavaozana ara-teknolojia azo alaina ao amin'ny tsena poloney raha haingana araka izay azo atao.
Ny mpiasan'ny tonian-dahatsoratra dia manantona ireo lahatsoratra ireo amin'ny fomba tena azo itokisana, ka mampiseho ireo tombony sy fatiantoka ateraky ny vokatra. Ny fitaovana Xiaomi sy ny andiany fahatelo dia azo vinavinaina amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fitsipi-pifehezana marobe, anisan'izany ny fijerin'ny fifehezana, izay ilaina mandritra ny fanamafisana, na ny fandidiana dia mamitaka, izay azo tanterahana amin'ny fampiasam-bola amin'ity fitaovana ity.
Raha manantena dinika lalina momba ilay vokatra voafantina ianao, dia mitsidika matetika ny tranokalanay. Manoratra amin'ny fiteny azo idirana izahay izay tsy manimba na mandroso na vao manomboka. Na dia toa sarotra aza ny teknolojia mifandray amin'ny trano marani-tsaina, ao amin'ny lahatsoratra ataonay dia aseho amin'ny fomba takatra sy mampahery na dia ho an'ny olona lao aza izany.
Ahoana no fanaovana ny rafitrao? Ahoana ny fanamboarana ireo fitaovana mamorona Xiaomi Aqara na tontolo hafa? Azonao atao ve ny mampifandray ireo sensor, cameras na fitaovana isan'andro amin'ny tranona maranitra? Ireo fanontaniana ireo dia mipoitra voajanahary, mitarika ho amin'ny fandinihana sy ny fikarohana.
Izany no antony amoahanay tsy tapaka ny toro-hevitra mifanaraka amin'ny andrasan'ny mpamaky liana momba ny lohahevitra momba ny mpanampy trano, ao anatin'izany i Xiaomi. Ny hetsika maro izay toa sarotra dia mazàna no hazavaina tsikelikely amin'ny fomba mora sy azo tanterahina, tsy mila fahalalana manandrana manokana.
Fantatsika fa ny fitadiavana ireo toe-javatra amin'ny fiteny sinoa na fitaovana ampiasaina sensor izay mbola tsy nampiasaina taloha dia toe-javatra ilain'ny fanampiana any ivelany. Raha hanamboatra HA, indraindray mila faharetana kely ianao ary loharano azo itokisana - toy ny tranokalanay.
BleBox, Google Home, Home Assistant, hevitra
BleBox shutterBox. Fanaraha-maso shutter roller miaraka amin'ny BleBox
9 Febroary 2021
blebox, Blebox shutterbox, Nitsirika kely, jamba mahira-tsaina
BleBox shutterBox no rafitra fanaraha-maso farany izay napetrako tao amin'ny tranoko. Tsy vao voalohany izao no mizaha toetra rafitra toy izany aho, koa amin'ity famerenana ity dia hitarika ireo fitaovana hafa ho hitanao eny an-tsena aho. BleBox ...
Apple HomeKit, BleBox, Home Assistant, hevitra
Blebox airSensor. Fanadihadiana momba ny rivotra
blebox, Blebox airSensor, sensor amin'ny kalitaon'ny rivotra, rivotra sensor
Vao tsy ela akory izay dia nahazo andiana fitaovana avy amin'ny Ultrasmart.pl aho hanaovana andrana ary ny fitaovana voadinika voalohany dia ny BleBox airSensor, izany hoe sensor momba ny kalitaon'ny rivotra. Ny setroka eo ivelan'ny varavarankely aza manandrana mamaky trano ao an-tranoko, ka fantatro fa tonga ny fotoana ...
Apple HomeKit, Google Home, Home Assistant, hevitra, Fandraisana Xiaomi
Aqara M1S - Mpandimby mendrika an'i Aqara Hub ve izany?
Aqar, hubara aqara, Aqara m2, vavahady, m1s, m2, mi hub v3, Xiaomi vavahady v3
Ny voalohany amin'ireo tanjona roa nataon'i Aqar izay nandrasanay amam-bolana maro. Aqara M1S, vavahady plug-in vaovao. Ahoana ny fomba fiasa? Mendrika ovaina miaraka amin'ny Aqara Hub ve izany? Fotoana famerenana! Aqara M1S dia mivantana ...